आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २५ गते सोमबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २५ गते सोमबार
साउन २५, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण २५ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त ९ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणशुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि वेलुका ६:४४ बजेसम्म, त्यसपछि द्वितीया रहनेछ ।
मेष : आफन्तजनसँग टाढिनु पर्नेछ । काम गरेर सन्तुष्टि मिल्ने छैन । तर मध्यान्ह पछि स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको संकेत देखिन्छ । पारिवरिक सहयोग मिल्नाले समस्याको अन्त्य हुनेछ । हर्ष बढ्नेछ ।
वृष : नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्ने अवसर मिल्नेछ । नयाँ मित्र बनाइनेछ । मध्यान्ह पछि एक्कासी स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । बोलिकै कारणले गर्दा विवादको स्थिति सृजना हुनेछ । चिन्ता एवं पीर बढ्नेछ ।
मिथुन : सिप तथा क्षमताको बृद्धि विकास हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा थपिनेछ । मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । साझेदारी कार्यबाट उचित रुपमा लाभ लिन सकिनेछ । अघिदेखिको परिश्रमको फल मिल्नेछ ।
कर्कट : आत्मियजनसँगको भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ । बोलिकै भरमा कार्यहरु बन्नेछन् । प्रतिष्पर्धात्मक काम कार्यमा विजयी भइनेछ । थालेका अधिकांश कार्यहरु बन्नेछन् । सुख सुविस्ताका साधनहरु जुट्ने छन् ।
सिंह : दिनको पूर्वाद्र्धको समय तनाबदायी रहेता पनि मध्यान्ह पछि नयाँ अवसर मिल्नेछ । सामान्य प्रयासले नै कार्य बन्नेछन् । विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ । काम गर्ने जोश जाँगर र हिम्मत थपिनेछ ।
कन्या : मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सरीक हुने मौका मिल्नेछ । वहान सुख मिल्नेछ । मध्यान्ह पछि विपक्षीले दु:ख दिने छन् । शारीरिक कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । सञ्चित धनरकम खर्च गर्नुपर्दा हैरानि लाग्नेछ ।
तुला : छोटो रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ । इच्छा आकंक्षाहरु बढेर जानेछ । कार्य क्षेत्रमा तपाईँको प्रस्तुतिले धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ । आज आकस्मिक रुपमा धन लाभ हुने देखिन्छ ।
बृश्चिक : भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । इमान्दारीताको पात्र बनिनेछ । नोकरीमा जस मिल्नेछ भने नयाँ जिम्मेवारी समेत थपिनेछ । नयाँ कार्यको आरम्भ गर्दा दिगो रुपमा लाभ लिन पाइनेछ ।
धनु : विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् । सोचे अनुरुप कार्य बन्ने छैनन् । आत्मबल घट्नेछ । तर मध्यान्ह पछिको समय सुधारोन्मुख रहनेछ । आर्थिक एवं व्यवहारिक पक्ष सबल रहनेछ । खुसी बढ्नेछ ।
मकर : प्रेम प्रसंग चल्नेछ । विपरीत लिंगिको सहयोगले कार्य बन्नेछन् । प्रीयजनसँगको रमाइलो भेट हुनेछ । नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मा पाइनेछ । मध्यान्ह पछि समस्या आइलाग्ने छन्, नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला ।
कुम्भ : धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । तपाईँको काम गर्ने कलाले धेरै व्यक्तिहरु मोहित हुनेछन् । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ । सहनशिलता र क्रियाशिलताको बृद्धि विकास हुनेछ ।
मीन : अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष प्रगति हुने देखिन्छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । परिवारजनसँगको रमाइलो पल वित्नेछ । व्यवसायबाट सोचे अनुरुप लाभ मिल्नेछ । बौद्धिक क्षमताको बृद्धि विकास हुनेछ ।